मोदी को स्वागत को भव्य तयारी , मिथिलानगरीमा हिन्दी प्रचार प्रसार ! – मुलधार न्युज
Home > राजनीति > मोदी को स्वागत को भव्य तयारी , मिथिलानगरीमा हिन्दी प्रचार प्रसार !
मोदी को स्वागत को भव्य तयारी , मिथिलानगरीमा हिन्दी प्रचार प्रसार !
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार २२:२६
२५ वैशाख, जनकपुर । भारतमा भाजपाले दिएको एउटा जबरजस्त नारा होः हर हर मोदी, घर घर मोदी । मोदी जहाँ जान्छन्, भाजपा कार्यकर्ता यही नारा लगाउँछन् ।
अहिले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर पनि मोदीमय भएको छ । के रुख, के पर्खाल, के चोक, के घर हरेकतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोटो झुण्डयाइएको छ । प्रायः धेरै ठाउँमा तुल ब्यानर बनाएर झुण्डयाइएको छ । हरेक तुल-व्यानरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको फोटो राखिएको छ ।
मोदी राजकीय भ्रमणका क्रममा २८ गते पटनाबाट सिधै जनकपुर अवतरण गर्नेछन् । उनलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकी मन्दिरमा स्वागत गर्दै संयुक्त पूजा गर्ने कार्यक्रम छ ।
तर, मोदीको स्वागतका लागि राखिएका अपवाद बाहेकका तुल ब्यानरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको तस्वीर छैन ।
‘विश्वको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक देश भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूसहित सम्पूर्ण अतिथिहरुलाई जगत जननी जानकीका क्रिडा भूमि जनकपुरमा हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत’ भनी तुल व्यानरमा लेखिएको छ ।
अर्को ब्यानर छ, ‘धन्यवाद तपाईंलाई आइदिनुभयो त्यसको लागि । धन्य भएको छ यो आँगन, स्वागत पुष्प स्वीकार गर्नुस् । धन्य भयो प्रदेशका जनताहरुको मन ।’
मोदीको ठूलो तस्वीरसहितका ब्यानरहरुमा उल्लेखित शब्दहरु हिन्दी भाषामै लेखिएका छन् । एकाध ठाउँमा भने प्रधानमन्त्री ओली, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह र उपप्रमुख रिता झाको तस्वीर छ ।
मिथिलानगरीमा हिन्दी किन ?
हिन्दी भाषामा मात्रै प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाएपछि मिथिलाको नगरी जनकपुरमा मैथिलभाषीहरु रुष्ट छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हिन्दी भाषालाई मात्र आधार बनाएर भारतीय प्रधानमन्त्री भ्रमणको प्रचार प्रसार गर्नु ठीक होइन्, मैथिली भाषाका प्राध्यापक श्यामसुन्दर शशीले भने, ‘जनकपुर मैथिलभाषीहरुको ठाउँ हो । यहाँ मैथिली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो ।’
प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र नेपाली भाषीहरु पनि भएकाले सबै भाषामा प्रचार गर्दा राम्रो हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै पनि हिन्दी भाषाको मात्रै किन प्रयोग ? भनेर प्रश्न आयो । जवाफमा उनले मैथिली भाषामा पनि प्रचार गर्न र प्रधानमन्त्री ओलीको पनि तस्वीर राख्न भनेको बताए ।
करिब साढे ८ लाख नगदसहित १२ जुवाडे पक्राउ
त्रि-चन्द्र कलेजका क्याम्पस प्रमुखलाई विद्यार्थीद्धारा कुटिए
बालिकालाई मिनीट्रकमा राखेर सामूहिक बलात्कार गर्ने नुवाकोटका तीन युवा पक्राउ
‘अक्सफोर्ड’ले आङसाङ सुचिलाइ दिएको पुरस्कार फिर्ता लग्यो
नौबिसे–कलङ्की सडक खण्डको जाम हटाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी सदरमुकाममै
बिमस्टेक शिखर सम्मेलन होटल सोल्टीमा हुने ।
Lomba Wins Three Awards at New York, USA
नेकपा अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डबीच भेटवार्ता
बागलुङमा पहिरो : ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमिः सर्वोच्च